Xasan Sheekh: “Ceebeyn waaye inuu Farmaajo yiraahdo Aadan Cadde ayaan ku dayanaa” – Radio Daljir
Xasan Sheekh: “Ceebeyn waaye inuu Farmaajo yiraahdo Aadan Cadde ayaan ku dayanaa”
Luulyo 9, 2021 4:26 g 0
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna hadda musharax Madaxweyne ayaa ku tilmaamay Madaxweynaha xilligiisu dhamaaday Farmaajo inuu yahay nin been badan oo aysan dhab ahayn inuu ku daydo howlaha uu u qabto bulshada Soomaaliyeed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya allaha u naxarisitee Aadan Cabdulle Cismaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ee Farmaajo uu ku soo galay ololihiisa doorashada sanadkii 2016ka ballanqaadyo been ah oo uu sameeyay haatana ay la mid tahay in uu yiraahdo waxaan ku dayanayaa siyaasadeyda Aadan Cadde.
“Raad kuma lahan, shaqo kuma lahan, ceebeyn waaye inuu farmaajo yiraahdo Aadan cadde aan ku daysanaa hal tallaabo oo raadkiisa ah oo uu farmaajo qaaday majiro.”ayuu yiri Xasan Sheekh Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo wareysi siiyay taleefishinka Goobjoog.
Sidoo kale waxa uu xusay Xasan Sheekh Maxamuud in Madaxweynihii hore ee Soomaaliya allaha u naxariistee Aadan Cabdule Cismaan uu yahay muwaadin xushmad leh,karaamo leh ku daysi leh,balse inuu yiraahdo Farmaajo Aadan Cadde ayaan ku dayanayaa ceeb ayay ku tahay Aadan Cadde.
“Siyaasadu been ma ahan,Qiiq isku qarin waaye,nin raba in uu Aadan Cadde magaciisa kaarka ku xoqdo,Aadan Cadde madaxweyne la yaqaan waaye oo taariiqdiisu qoran tahay,in dadka Soomaaliyeed waagii loo sheegi jirey beenta waa soo dhamaatay.”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Wareysi dheer uu siiyay Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa wax laga weydiiyay arrimo badan waxana uu ku eedeeyay dowlada federalka inaysan bulshada hadal ku qancin gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay saraakiisha ciidamada AMISOM ee Sector 2